Hibada Caqligu Waa Mid Kooban Horumarkuna Waa Dadaalka - Xogside
Home BARNAAMIJYADA Hibada Caqligu Waa Mid Kooban Horumarkuna Waa Dadaalka
Hibada Caqligu Waa Mid Kooban Horumarkuna Waa Dadaalka
Dadka Hamiga sare leh waa kuwo tiro yar oo kooban kuwaasi ayaana dunida wax ka bedela. Thomas Adison oo ahaa ninkii soo saaray laambada laydhka wuxuu ahaa yaraantiisii wiil yar oo su’aalo badan. Thomas markii lagu daray dugsiga nasiib daro mudo badan kuma sii jirin dugsiga, Wax kasta oo loo soo dhigo waa uu iloobi jiray sidaa daraadeed waxa uu ahaa ardayga ugu hooseeya fasalka. Macalimiinta ayaa ka quustay waxaana ay ka soo qaadeen inuu yahay qof yar oo aan maskax ahaan dhamayn oo maraan ah.
Dadaalka ugu badan hooyadii ayaa u gashay oo wax bartay markii ay akhriday warqadii loo soo dhiibay waxa ku qornaa “ Wiilkaagu waa maraan, aan waxbarashada la qabsan Karin, sidaa awgeed waan ka erinay dugsida” . Hooyadii ayaa u sheegtay inay iyadu guriga wax ku bari doonto oo aanu werwerin.
Tareenka ayaa maalin si lama filaan ah duqeeyay meel, waxaana wada daatay agabkii kala duwanaa ee uu ku kaydiyay kimikada uu tijbaada ku sameeyo. Maamulka Tareenka ayaa ka eryay tareenka iyagoo alaabtiisana ku amray inuu ka gurto markii ay ka cadhoodeen kimikada aanay ogayn ee ku dadaatay tareenka. Ninkaasi dhibtaasi ku dhacaysaa waa Thomas Adson oo ah ninka curiyay ee ikhtiraacay laambada laydhka meel kasta ka ifaysay dunida maanta. Waxa uu ahaa nin Maraykan ah oo noola 1847- 1931. Waxaana uu yidhi halku dhigga ah : “Hibadu caqligu waa 1%, laakiin 99% waxa uu qofku ku gaadha dadaalka uu la yimado horumarka”.
Previous articleDawladda Hoose Ee Hargeysa Oo Ku Dhawaaqday Kaalmaha Ku Guuleystay Qandaraaska Shiidaalka Dawladda Hoose Ee Hargeysa
Next articleDhibaato Kasta Waad Maareyn Kartaa